Crystal Palace Vs Man United - Iftiin FM
by Iftiin FM Reporter July 16, 2020
Kooxda Man United ayaa marti u noqon doonta kooxda Crystal Palace kulan ka tirsan todobaadkii 36-aad ee horyaalka Premier League kana dhici doona garoonka Selhurst Park.
Crystal Palace ayaa laga badiyay shantii kulan ee ugu dambeysay laakiin waxa ay markii ugu horaysay taariikhdeeda 2 kulan oo xidhiidh ah ka badin kartaa Man United kadib markii ay 2/1 uga badisay kulankii Old Trafford ee ka dhacay bisha August.
Hazard oo go'aan ka gaaray mustaqbalkiisa Ciyaareed.
Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa isha ku haysa in ay gaadho guusheedii 3-aad oo xidhiidh ah oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda kadib markii 3/0 ku badisay labadii kulan ee ugu dambeeyay.
Kulanka: Crystal paalce Vs Man United
Kooxda Crystal Palace ayaa guuleysatay 7 ka mid ah sagaalkii kulan ee ay ciyaareen Premier League kaasoo uu Jordan Ayew gool u dhaliyay.
Xiddiga Romelu Lukaku oo iska diiday kooxaha Chelsea Iyo Man City .
Roy Hodgson ayaa doonaya inuu ka fogaado guuldarro lix kulan oo xidhiidh ah premier League markii ugu horaysay tan ilaa 3-dii kulan ee ugu dambeeyay ee uu tababaraha u ahaa kooxda Blackburn Rovers bishii November 1998.
Man Utd ayaan laga badinin 11kii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen ee ay wajaheen Crystal Palace tan iyo guuldaradii 3-0 ee dhacday bishii May 1991.
Edwin van der Sar oo amaan kala dul dhacay Kooxda Man United.
Bruno Fernandes ayaa noqon kara ciyaartoygii ugu horreeyay ee Man Utd ee shabaqa soo Taabta shan kulan oo xidhiidh ah premier League ay marti ahaayeen tan iyo markii uu Zlatan Ibrahimovic Sidaas sameeyay bishii January 2017 waxana uu noqon karaa midkii 4-aad ee sidaas sameeyay kadib Ruud van Nistelrooy,Robin van Persie Iyo Zlatan Ibrahimovic.
Farmaajo oo ka qeybgalay aaska Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somalia.
Kooxda Juventus oo guul weyn gaartay .